Thursday April 05, 2018 - 20:04:06 in Wararka by Super Admin
Mid kamida wadaadada ugu caansan wadanka Sacuudigaa taageeray isbedellada sida xowlliga ah ee ku socda ee Max'med Bin Salmaan uu u qaadayo dhanka calmaaniyadda.
Sheekh Caadil Alkalbaani oo kamid ah culimada waaweyn wadanka Sacuudiga ayaa si lama filaan ah udaah furay munaasabad lagu daah furayay Cayaarta Qamaarka ee loo yaqaan Bolot oo markii ugu horraysay taariikhda lagu qabanayo wadanka Sacuudiga loo yaqaan.
Alkalbaani oo munaasabadda kalimad kooban ka jeediyay ayaa sheegay in ciyaaruhu muhiim u yihiin isbedelka ku cusub ee Sacuudiga laga hir gelinayo wuxuuna wax banaan ku tilmaamay dhammaan ciyaaradaha nuucaan oo kale ah.
Warka Wadaadkan kasoo yeeray ayaa Buuq iyo dood ka dhax abuuray baraha bulshada ee dhalinyarada carabtu isticmaasho, inta badan culimada sacuudiga iyo kuwa khaliijka ayaa isku waafaqsan in ciyaarta Bolot-ku ay tahay xaaraan Qamaar ah.
Dhinaca kale Labo isbuuc kadib waxaa dhulka Xarameynka ka furmi doona shaneemadii ugu horeysay oo soo bandhigta Aflaam akhlaaq dara ah, waxaana shaneemadaas furi doonta shirkad laga leeyahay dalka Maraykanka.
Wasiirka warfaafinta maamulka Aala-Sucuud oo la hadlay wakaaladda wararka ee maamulkaas ayaa sheegay iney siiyeen ogolaansho dhameystiran shirkadda IMC oo ay ku furi karan shaneemada.
Sida uu wasiirku sheegay waxaa shaneemooyinkan si gaar ah uga faa’ideysan doona dhalinyarada Xarameynka, isagoona intaa ku daray in shanta sano ee soo socota 41 shaneemo laga furi doono 25 magaalo oo katirsan dhulka Xarameynka.
Muxamed Bin Salmaan oo ku sugan dalka Maraykanka ayaa shirar kala duwan la yeelanaya shirkado ku yaala wadankaasi Maraykanka, kuwaas oo howshoodu tahay arimaha shaneemooyinka, waxaana Los Angles ka furmi doona kulan looga hadlayo mustaqbalka shaneemooyinka laga furayo dhulka Xarameynka ee xurmadiisa ay ku tumanayaan maamulka Aala-Sucuud.